Kitapom-batana voaova (MAP) - Utien Pack Co ,. Ltd.
Masinina maimaimpoana ho an'ny efitrano roa
Soloy ny lasantsy voajanahary ao anaty fonosana amin'ny gazy voatokana ho an'ny vokatra. Misy endrika roa fonosana amin'ny habakabaka voaova ao youtianyuan: fonosana rivotra miovaova thermoforming sy fonosana valindrabao efa nohavaozina.
Fonosana ny rivotra iainana (MAP)
Ny fonosana amin'ny atmosfera novaina dia matetika hitazonana ny endrika, ny lokony ary ny fihavaozan'ny vokatra. Ny gazy voajanahary ao anaty fonosana dia soloina fifangaroan-tsolika mety amin'ny vokatra, izay mazàna dia misy gazy karbonika, azota ary oxygen.
Fonosana MAP ao amin'ny Thermoforming
Famaritana tombam-bidin'ny MAP
Azo ampiasaina amin'ny fonosana hena manta / nandrahoina, akoho amam-borona, trondro, voankazo sy legioma na sakafo masaka toy ny mofo, mofo ary vary boaty. Izy io dia afaka mitahiry tsara kokoa ny tsiro tany am-boalohany, ny lokony ary ny endriny, ary mety hahatratra fe-potoana fitahirizana lava kokoa. Izy io koa dia azo ampiasaina hanangonana vokatra ara-pitsaboana sy ara-teknika sasany.
Ny fonosana amin'ny atmosfera novaina dia afaka manitatra ny andian'ny vokatra tsy mampiasa additives sakafo. Ary afaka mitana andraikitra fiarovana amin'ny fizotran'ny fitaterana vokatra hisorohana ny fahasimban'ny vokatra. Ho an'ny vokatra indostrialy, ny fonosana atmosfera novaina dia azo ampiasaina mba hisorohana ny fahasimbana. Ao amin'ny sehatry ny fitsaboana, ny fonosana amin'ny atmosfera novaina dia afaka miaro ny vokatra ara-pitsaboana miaraka amin'ny takiana famonosana avo lenta.
Masinina fonosana ana fitaovana famonosana
Ny milina famonosana horonantsary thermoforming sy ny milina famonosana boaty preformed dia azo ampiasaina amin'ny fonosana atmosfera novaina. Ny milina famonosana boaty efa niamboho dia mila mampiasa boaty fitaterana efa voaomana preformed, raha ny milina famonosana thermoforming kosa dia ny fanaovana dingana hafa toy ny famenoana, famehezana sns sns aorian'ny famelarana ilay horonan-tsary nihodina an-tserasera. Ny bikan'ny vokatra vita aorian'ny fonosana atmosfera novaina dia boaty na kitapo.
Ny milina fametahana thermoforming dia azo namboarina mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa, toy ny fanamafisana, fanontana logo, lavaka fametahana ary famolavolana firafitra hafa, mba hanatsarana ny fitoniana amin'ny fonosana sy ny fanentanana amin'ny marika.